Ampahafantaro ny fombafomba fatoriana
Hiran'ny ankizy alina
Indrindra ho an'ireo ankizy tsy dia milamina amin'ny hariva alohan'ny hatory, ny fihirana rima ao anaty akanin-jaza dia fanampiana tsara rehefa misosa mangina moramora izy ireo. Ny ray aman-dreny dia tsy tokony ho matihanina ihany koa, mba hahitany ny tombony betsaka amin'ny rima garderie ho an'ny torimaso azon'ny taranany. Tokony hisy aza ny ray aman-dreny tsy sahy mihira zavatra ho an'ny zanany amin'ny hariva alohan'ny hatory satria mihevitra izy ireo fa tsy mahay mihira tsara.
Hiran'ny ankizy hanampy anao hatory
Saingy tsy ny fikapohana ny naoty rehetra foana akory, fa ny hoe ny feon'ny ray aman-dreny mihira dia afaka mampitony ny ankizy amin'ny ankapobeny.
Ka naseho fa ny ray na ny reny dia tsy voatery ho matihanina mihira velively mba hiteraka torimaso tsara kokoa amin'ilay zaza vao miasa. Na izany aza, tokony hojerena ny safidin'ny hira tsara. Satria matetika ny lullabies dia natao ho an'ny ankizy kely ary ny feon-kira dia tena milamina sy mirindra, izay manamora ny torimaso.
Ny olon-dehibe aloha dia tokony mihaino ilay hira mifanaraka aminy alohan'ny hampiasany hira hanampiana ny zanany hatory. Ity dia fomba tsara iray hamaritana raha ny tononkiran'ny akanin-jaza dia tena misy vokany mampitony, mampitony ary soporific.
Fanamarihana sy tononkira hira mahafinaritra amin'ny alina
Misy ihany koa ireo rima momba ny akanin-jaza izay manome aina kokoa noho ny soporific noho ny feon-kira. Ny ray aman-dreny mihira hira fampiononana ho an'ny zanany dia afaka manao izany koa miaraka amina feon-javamaneno malefaka, ohatra, avy amin'ny mpamaky CD.
Na ny zaza tia ny gadon-kira tsara kokoa amin'ny feo fotsiny na miaraka amin'ny fanarahana fitaovana dia azo faritana mora avy amin'ny fihetsika. Tsy ny kilasika taloha ihany no malaza amin'ny ankizy kely, fa koa ny hiran'ny ankizy nentin-drazana sy maoderina hatory.
Mirary hariva, mirary alina
niposaka ny volana
Fantatrao ve ny isan'ny kintana
Matory zaza matory
Sasatra aho hiala sasatra
Milamina ankehitriny ny ala rehetra
Eto dia ampirisihina ny ray aman-dreny hanao fanandramana kely hahafahany misafidy mety rehefa afaka andro vitsivitsy izay hanohanana maharitra ny fizotry ny torimaso an'ny zanany. Ny zaza dia mihetsika amin'ny fombafomba amin'ny fahazazany. Isan'andro ny torimaso torimaso dia voahodidin'ny fombafomba toy izany, ao anatin'izany ny oroka amin'ny alina, ny kilalao maloto na ny pacifier. Ny hiran'ny ankizy ataon'ny ray aman-dreny koa dia fombafomba tena tsara manampy anao hatory.
Raha tsy afaka na tsy te hihira isaky ny hariva ianao dia azonao atao koa ny manoratra ireo hiran'ny ankizy isan-karazany mba hanampiana anao hatory amin'ny kasety na CD ary alefaso amin'ny zanakao amin'ny feony tsy dia avo loatra hanampiana azy ireo hatory. Naseho fa ny feon-kira mihira ny ray aman-dreny avy amin'ny kasety dia eken'ny ankizy kely ho toy ny feo velona. Ny zaza tsirairay dia samy manana ny tsirony avy, ary koa rehefa miresaka hira sy feon-kira, ary tokony hanaja izany koa ny ray aman-dreny. Raha ny hiran'ny ankizy iray dia tsy heverina ho tsara amin'ny voalohany na raha tsy eo ny vokatra irina hatoriana dia tsy midika izany fa mandà ilay gadona ilay zaza.
Ny antony mahatonga ny maizina eto amin'ny alina dia misy ifandraisany amin'ny taona an'izao rehetra izao koa. 14 miliara taona izao - tombanana, mazava ho azy. Ny elanelana misy eo amin'ny vahindanitra dia manodidina ny zato tapitrisa tapitrisa tapitrisa taona mazava. Mifanohitra amin'ny feo mifanohitra amin'izay fa azo atao satria manitatra izao rehetra izao.
Raha toa sarotra loatra izany rehetra izany ho anao sy ny zanakao manontany hoe maninona no maizina amin'ny alina dia tsara ny manome ny valiny mahazatra. Ny masoandro amin'ny alina any an-danitra sy ny halavirana lavitra dia azo antoka fa manintona ny ankizy!
Pejy fandokoana tsingerintaona nahaterahana
Silent Night - naoty na lahatsoratra
Pejy fandokoana Ny tantaran'ny angano Arabo alina alina
Mozika sy feon-kira ho an'ny ankizy - mozika ho an'ny ankizy